ပေါ့ပါးခိုင်ခန့် သည့် ကွန်ကရစ်ဘလောက် (Autoclaved Aerated Concrete Block) - BaganMart
PAP Concrete Block (စက်အုတ်)
ရိုးရှင်းသော ဒီဇိုင်းပုံစံဖြင့် Wood Door
FLOOR PATTERN ဆန်းသစ်လှပသော ကြမ်းခင်းများ
ကွညျ့ရှု့သူ အရအေတှကျ : 1342 view counts
ပေါ့ပါးခိုင်ခန့် သည့် ကွန်ကရစ်ဘလောက် (Autoclaved Aerated Concrete Block)
စြေးနူနျး : 950 Kyats per Piece(s)
Brand : Mother Industrial
Model : AAC
လုပျငနျးအမညျ : MOTHER INDUSTRIAL CO., LTD.
ဖုနျးနံပါတျ : 09-970618300,09-970618700
အသုံးပြုသောနေရာ : အဆောက်ဦးနှင့်ဆောက်လုပ်ရေး
Standard : GB11968-2006 :Grade B 06
Size : (600x 200x100)mm
Dry Density : 600 to 625 kg/m3 (Oven dry)
Strength Grade : 3.5 to 5.0 MPa (507.5 to 725 psi ) (Oven dry)
Fire Resistant : >4 Hrs. at 700`C
Pest Resistant : 100% resistant to all inset.
Sound Reduction Index : 43 to 60 dB (depending on thickness)
Energy Saving : 15%
Blocks can be easily cut, drilled, nailed, milled and grooved to fit individual requirement. It’s also available in custom sizes subject to negotiation.
AAC blocks resist with moisture. Because AAC blocks has very less water absorption compare to other bricks.
Water require property is very good .In construction require less water compare to clay brick and other traditional bricks during curing; plastering and laying process.
AAC Bricks has 1/3 density compare to clay bricks. Hence AAC Bricks is very light weight material.
Acoustically Absorbent And Environmentally Friendly:
AAC Blocks provide excellent sound insulation millions of Air bubbles react with waves. So, AAC Block have highly sound transmission properties these blocks are preferred in construction of flat systems, hotels, IT offices, recording studios, multiplexes etc.
With solid wall construction and finishes which bond to the wall there are fewer cavities for insets or rodents to dwell in. Termites and ants do not eat or nest in AAC Block.
*Special sizes required by customers shall available subject to negotiation. (Easy to Use, Quick Installation, Reduce the Price and Good Quality.)
AAC block များသည် အဆင့်မြင့်နည်းပညာ/ခေတ်မှီစက်ကြီးများဖြင့် အင်းစိန်မြို့ နယ်တွင် ထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါသည်။ AAC block များသည် တင့်သင့်သောဈေးနှုန်း၊ ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေး၊ ပေါ့ပါးခိုင်ခံ့မူကြောင့် လျှင်မြန်သောတည်ဆောက်မှုကိုရရှိပါသည်။ ထို့ အပြင် ထုတ်လုပ်သုံးစွဲမှုသက်တမ်းတလျှောက် စွန့် ပစ်ပစ္စည်းမရှိသဖြင့် လူနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။ သက်တမ်းကြာရှည်ခံပါသည်။ အပူဒဏ်ကိုကာကွယ်သည် လေအေးစက်အသုံးပြုမှုကို လျှော့ချသုံးစွဲနိုင်သည် မီးလောင်မှုကို ၇၀၀`C ကို ၄ နာရီကြာခံနိုင်ပါသည်။ အဆိပ်အတောက်မရှိပါ။ အငွေ့ အသက်မရှိပါ။ ဆူညံမူကိုလျော့ချပေးသည်။ ရိုးရိုးအုတ်နီခဲ ( ၁၈ )လုံး နှင့် ညီမျှပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့အနေဖြင့် သင့်တင့်သောဈေးနှုန်းဖြင့် အထာကျ ခိုင်ခံ့ ခေတ်မှီသော အဆောက်ဦးကိုရရှိရန် AAC block ဖြင့်တည်ဆောက်ပါ အကောင်းဆုံး အဆောက်အဦး ရရှိရန် လူကြီးမင်းတို့ နှင့် ထပ်တူကြိုးစား ဆောင်ရွက်ပေးနေပါပြီ။
To Protect Environment Damage & To Prevent Agricultural Land.
To Promote the Quality of Construction Material, To Promote the Customer Living Standard and Comfort and To Provide Affordable Price of Structure.
ဖိအားမြင့်ခံ ကွန်ကရစ်အုတ် (Autoclaved Pressed Concrete Brick)
အရည်အသွေးမြင့် ပေါ့ပါးသော ကွန်ကရစ်ဘလောက် (AAC Block)
For ပေါ့ပါးခိုင်ခန့် သည့် ကွန်ကရစ်ဘလောက် (Autoclaved Aerated Concrete Block)
May I get the quotation for "ပေါ့ပါးခိုင်ခန့် သည့် ကွန်ကရစ်ဘလောက် (Autoclaved Aerated Concrete Block)" ?